Gudbinta Boostada | Adeeg Rakib Rakhi ah | Gudbinta Xamuulka | AUSFF
Hel cinwaanka Boostada ee Australia iskuna day qorshaheenna 'One off Plan'
waayo, BILAASH adoo isticmaalaya code Promo: HI5
Waan fureynaa waana sii wadeynaa inaan gaarsiino, Fadlan eeg Covid-19 Cusbooneysiinta inta badan isbeddelada ugu dambeeyay
1. DUKAAN KAGA DUKAAN DHAQAALAHA KOOBAN EE QARANKA
Waad ka adeegan kartaa dukaan kasta oo AU ah oo xirmooyin laguugu soo diro cinwaankaaga Ausff. Sidoo kale waxaan kaa caawin karnaa dukaamaysiga.
2. XIDHIIDHKA QAADASHADAADA AMA SI AAD UGU DIR
Waxaad ku xoojin kartaa baakadahaaga dukaamada kala duwan hal xirmo oo weyn, si aad ugu kaydiso kharashaadka maraakiibta caalamiga ah.
3. XIRIIRKA KUU SOO DIR
Ka dib marka baakadahaaga oo dhami ay diyaar yihiin, mid ka dooro fursado badan oo rar in aan bixino. Waxaan ka haynaa qiimo-dhimis ballaaran shirkadaha maraakiibta, sidaa darteed kharashyada dhoofintu aad ayey u hooseeyaan.
Adeegga Diyaarinta Amazon
Waxaan bixinaa ka dib Amazon Adeegyada Diyaarinta si loo daboolo dhammaan waxyaabaha sida
Jajaban / Muraayad
Dharka, Dharka, Dharka, iyo Dharka
Xadhig, Yar, Xirxirida Calaamadaha
Alaabada Dadka WaaweynAKHRI WAX DHEERAAD AH
Ma jeceshahay inaad ka iibsato ama ka iibiso Ebay.com.au oo aad sahamiso adduunka Fursadaha $$$$
La hadal Shaqaalaheena kuwaas oo kaa caawin kara shuruudahaaga Ebay.
Worldwide** Adeegga Maraakiibta
Fadlan Hubso Dalalkaaga Shuruudaha
** ka-reebitaannada khuseeya
Xulo Dalkaaga Afghanistan Albania Algeria American Samoa Andorra Angola Anguilla Antigua & Barbuda Argentina Armenia Aruba Australia Austria Azerbaijan Bahamas Bahrain Bangladesh Barbados Belarus Belgium Belize Benin Bermuda Bhutan Bolivia Bonaire Bosnia & Herzegovina Botswana Brazil Brunei Bulgaria Burkina Faso Burundi Cambodia Cameroon Canada Canary Islands Cape Verde Cayman Islands Central African Republic Chad Chile Shiinaha Colombia Comoros Congo Congo, DRC Cook Islands Costa Rica Croatia Curacao Cyprus Czech Republic Denmark Jabuuti Dominika Dominican Republic East Timor Ecuador Masar El Salvador Equatorial Guinea Eritrea Estonia Itoobiya Falkland Islands Faroe Islands Fiji Finland France French Guiana Gabon Gambia Georgia Germany Ghana Gibraltar Greece Greenland Grenada Guadeloupe Guam Guatemala Guernsey Guinea Bissau Jamhuuriyadda Guinea Guyana Haiti Honduras Hong Kong Hungary Iceland Hindiya Indonesia Ciraaq Ireland Israa'iil Italy Ivory Coast Jamaica Japan Jersey Urdun Kazakhstan Kenya Kiribati Kosovo Kuwait Kyrgyzstan Laos Latvia Lubnaan Lesotho Liberia Liechtenstein Lithuania Luxembourg Macau Macedonia Madagascar Malawi Malaysia Maldives Mali Malta Islands Marshall Martinique Mauritania Mauritius Mayotte Mexico Micronesia Moldova Monaco Mongolia Montenegro Montserrat Morocco Mozambique Namibia Nauru Nepal Netherlands Nevis New Caledonia New Zealand Nicaragua Niger Nigeria Niue Northern Mariana Islands Norway Cumaan Pakistan Palau Panama Papua New Guinea Paraguay Peru Filibiin Poland Portugal Puerto Rico Qadar Jasiiradda Reunion Romania Russia Rwanda Saba Samoa Sao Tome Saudi Arabia Senegal Serbia Seychelles Sierra Leone Singapore Slovakia Slovenia Jasiiradaha Solomon Soomaaliya Wakiilka Somaliland Koonfur Afrika South Korea South Sudan Spain Sri Lanka St Vincent St. Barthelemy St. Eustatius St. Kitts St. Lucia St. Maarten Suriname Swaziland Iswidhan Switzerland Tahiti & French Polynesia Taiwan Tajikistan Tansaaniya Thailand Togo Tonga Trinidad & Tobago Tunisia Turkey Turki & Caicos Tuvalu Uganda Ukraine United Arab Emirates Boqortooyada Ingiriiska United States Uruguay US Virgin Islands Uzbekistan Vanuatu Venezuela Vietnam Yemen Zambia Zimbabwe
DUKAANKAAGA LOOGU TALAGALAY EE DUKAANKA DUKAANKA CARGO CARGO IYO BAD XAFIDDA
CODSADO QORAAL BILAASH AH
Shabakad caalami ah oo hawada hawo la'aan ah
Adeegyada xoojinta maalinlaha ee Soo Dejinta iyo Dhoofinta
Shixnadaha tooska ah ee IATA
Isukeenista alaab-qeybiyeyaal badan
Kala-soocidda iyo qiimeynta talo
La tashiga Ganacsiga
Sheegashooyinka dib u dhaca shaqada
Soo Celinta Waajibaadka Canshuuraha
Tariifada iyo Xamuulka AUDITS
Adeegyada Gudbinta ee loo habeeyay baahiyaha shaqsiyeed
Albaaba alaabada rarka - Soo dejinta iyo Dhoofinta
Maareynta xoojinta iibsadayaasha
Raadinta xamuulka internetka iyo baafinta shixnadaha soo dejinta / dhoofinta
Bakhaarro iyo bakhaarro
Xamuulka iyo dib u xirxirida xamuulka
Caymiska badda xamuulka
La tashiga xamuulka gudbinta
Soo dejinta iyo dhoofinta rarka culeyska badaha
Rakibida Weelka Qaybta LCL
FCL Xamuul Xamuul Buuxa
Iskuduwaha alaab-qeybiyeyaal fara badan (LCL iyo FCL)
Xamuulka caadiga ah (breakbulk)
Marabtaa Iskaashatada Ganacsiga Aussie?
Marabtaa inaad u rarto Australia? Ma garanaysid sida loo galo Bixinta Sahayda
Dhar & Dhar
Madadaalo iyo waxyaabo badan oo dheeri ah
Dhammaadka Adeegyada Macaamiisha
Waxaan adeeg u fidinaa Dhammaadka Macaamiisha Dhamaystiran (EC) iyo Ganacsiga Yaryar iyo Dhexe (SMB)
Kaydinta bilaashka ah ee 60 maalmood
Sawirrada Kahor Bixinta
Adeegyada Ganacsiga Yaryar iyo Kuwa Dhexe
Ku rarida mashiinno culus oo ay kujiraan kala furfurida, karbaashida, xannibaada iyo isku xirida heerarka maraakiibta la xaqiijiyay) aduunka oo dhan
Adeegyo gaar ah oo loogu talagalay rarida qalabka culus hawada iyo badda
Is-Baakadaha weelka lagu dhaqaajiyo ee la heli karo waxaa laga heli karaa Australia albaab ballaaran illaa albaab ama albaab ilaa dekedda adduunka oo dhan
Adeegyada isku dhafka xamuulka badda ee LCL ee ka socda dhammaan magaalooyinka waaweyn ee Australia
Weelasha is-wareejinta ee laga heli karo xarumaha adduunka oo dhan
Adeegyada xoojinta xamuulka ee dhoofinta iyo soo dejinta caalamiga ah
Adeegyada xamuulka hawada ee mudnaanta leh ee xamuulka hawada xasaasiga u ah waqtiga
Macaamiil si heer sare ah u tababaran ayaa diirada saaray xamuulka caalamiga ah ee xamuulka
Lambarka 1aad ee Xamuulka Australia
Ustaraaliya waxay maalin walba galeysaa qadka internetka iyo we waxay albaab siinayaan macaamiisha adduunka iyo milkiilayaasha meheradaha si ay u sahamiyaan kartida aan la baarin ee Suuqa Australia.
Xafiiskayagu wuxuu ku yaalaa laga bilaabo Sydney - Australia iyo ganacsigeenna gabi ahaanba waa hufan.
Adigu Dukaan, Waan Rarnaa
Dukaammo badan oo khadka tooska ah ee Australiyaanka ah iyo xubnaha Ebay ma rartaan caalami ahaan, halka kuwa laga tirada badan yahay oo u badan inay qaadaan lacag maraakiib badan. Dukaan kasta oo aad ka iibsato, waxaan kuugu soo iibin doonnaa alaabadaada tallaabada albaabkaaga, iyo heerarka ugu hooseeya ee maraakiibta ee warshadaha.
Ma laha kaarka amaahda ee Australia? Waanu kuu soo iibin doonaa
Dukaammo badan oo khadka tooska ah ee Australiyaanka ah waxay aqbalaan oo keliya lacag bixinta kaararka deynta ee AU ay bixiso / cinwaannada qaansheegta ee AU.
Midna ma lihid? Si fudud u isticmaal adeeggayaga 'Concierge service', waxaan ku iibsan doonnaa walxahaaga magacaaga oo waxaan heli doonnaa AU. keydi si aad ugu dhiibto AU-kaaga. cinwaanka. Markay xirmooyinka (yaashu) yimaadaan, waxaan kugu soo wargelin doonnaa emayl ahaan.
Waligaa ha ku bixin qiimo buuxa maraakiibta caalamiga ah. Weligay.
Sameynta iibsiyo badan oo aad rabto xirmooyinkaaga in lagu daro hal shixnad? Ma dooneysaa in xirmooyinkaaga la yareeyo si loo yareeyo culeyskaaga rarka? Raadinta keyd bilaash ah adiga oo sugaya baakado kale inay yimaadaan? Tani waa sida saxda ah ee aan adiga kuu qabanno. Adiga oo ah kooxdaada, waxaan kaa caawin doonaa inaad keydiso ilaa 90% maraakiibta caalamiga ah. Markasta oo aad markab badato, wax badan ayaad badbaadinaysaa!
Waxyaabaha (yada) mamnuuca ah ama xaddidan
Waxyaabaha guban kara isla markaana ololi kara oo ay ka mid yihiin rinjiga, saliidaha, laydhadhka, cadarka, cidiyaha cilaaqaadka, baytariyada dabacsan iwm.
Qalabka cadaadiska lagu buufiyo sida timaha lagu buufiyo, kareemka xiirista, ama gasacadaha lagu buufiyo nooc kasta oo ay yihiin iyo walxaha halista ah sida shidaalka, kiimikooyinka, ama waxyaabaha qarxa.
Daroogooyinka (nooc kasta ama qaab kasta), hubka fudud, hubka, iyo qeybahooda iyo qeybahooda, oo ay kujiraan militariga, booliska iyo qalab taatiko noocuu doono ha ahaadee, qoryaha, qoryaha oo la mid ah, qalabka qoryaha, qalabka qoryaha (joornaalada, clips, iyo nidaamka tareenada), rasaasta , mindiyo leh garbaha oo ka weyn 6 ″, seefo, qaansooyin isku dhafan, iskutallaabooyin, hub ka soo daaya sida budada naxdinta leh ama qoryaha naxdinta leh, qalabaynta qoryaha ama qeybaha qoryaha, qoryaha ranjiga iyo qalabka la adeegsado, baaxadda indhaha, indhaha laser, indhaha habeenkii, muraayadaha indhaha habeenkii, silsilado iyo qalab kale oo lagu ilaaliyo. Asal ahaan, haddii loo adeegsan karo hub ahaan, ma dajin doonno.
Wax soo saarka beeraha sida dhirta, abuurka, miraha, iyo lowska.
Cunnooyinka kharriba nooc kasta ha ahaadeene waa mamnuuc.
Xayawaanka iyo alaabada lagu sameeyo dhogorta xayawaanka waa laga mamnuuc dalalka badankood.
Khamriga nooc kasta ha lahaadee, tubaakada iyo waxyaabaha nikotiinka leh nooc kasta ha ahaadeene, oo ay ku jiraan sigaarka elektarooniga ah iyo waxyaabaha ka kooban.
Lacag caddaan ah, lacag, amarro lacag ah, kaararka amaahda iyo kaararka (oo ay ku jiraan kaararka lacagta lagu shubo), bullaacad iyo biraha qaaliga ah, jeegagga qasnajiga, jeegagga bangiga, curaarta dadka qaata, shaambadaha la ururin karo iyo lacagta qadaadiicda ah, kaararka google, tigidhada bakhtiyaa-nasiibka, ama aaladaha khamaarka iyo alaabada.
Dahabka iyo dhagxaanta qaaliga ah waa kuwo ku xaddidan dalalka qaarkood oo aan la daaweyn karin ugu badnaan $ 500. Alaab kasta oo dahab ah oo ka badan xaddiga $ 500 ee gaadhiga xaddigeedu noqon doonaa caymis la'aan macaamilkuna wuxuu qaadanayaa dhammaan halista luminta ee ka sarraysa xadkaas.
Daawooyinka dhakhtarku qoro waa mamnuuc.
Pornography waa ka mamnuuc waddamada badankood.
Fadlan nala soo xiriir ka hor intaadan dalban amarkaaga, haddii aadan hubin wax soo saar ama shay kasta.
Xuquuqda daabacaadda 2012 - 2021 AUSFF waxay ka mid tahay shirkadda RKH Enterprises Pty Ltd | ABN: 99 149 068 619
Sababta oo ah cookies-gu waa mid lagama maarmaan u ah gudbinta websaydhka, diidmada waxay saameyn ku yeelan doontaa sida ay u shaqeyso bartayada. Had iyo jeer waad xannibi kartaa ama tirtiri kartaa cookies adiga oo baddalaya jaangooyooyinka biraawsarkaaga oo aad ku khasbi karto xannibaadda dhammaan kukiyada boggan internetka. Laakiin tani had iyo goor waxay kugu dhajin doontaa inaad aqbasho / diido buskudyada markaad dib u booqaneyso bartayada.
Waxaan si buuxda u xushmeyneynaa haddii aad dooneysid inaad diido kukiyada laakiin aan ka fogaano inaan ku weydiino mar labaad iyo mar kale si naxariis leh noo oggolow inaan ku keydiyo cookie taas. Waxaad xor u tahay inaad ka baxdo wakhti kasta ama aad gasho kukiyada kale si aad u hesho waayo-aragnimo fiican. Hadaad diido kukiyada waxaan ka saari doonnaa dhamaan cookies ka sameysanka kujira.
Waxaan ku siineynaa liis ku keydsan kaydinta kumbuyuutarkaaga kumbuyuutarka ee ku jira kaydkeena si aad u hubiso waxa aan keydinay. Sababo nabadgelyo awgood ma awoodno inaan tusno ama wax ka beddelno kukiyada ka imanaya domains kale. Waxaad ka hubin kartaa kuwan habaynta amniga biraawsarkaaga.
Hubi si aad u suurto galiso qarinta joogtada ah ee bar fariinta oo aad diido dhamaan cookies-ka hadaadan dooran. Waxaan ubaahanahay 2 cookies si aan u keydiyo goobtaan. Haddii kale waa lagugu soo wargelin doonaa mar labaad markii aad furmeyso daaqad biraawsar cusub ama tab cusub.
Guji si aad u awoodo / aad uxiriso buskudka boggaga muhiimka ah
Waxaan kaloo isticmaalnaa adeegyo dibadeed oo kaladuwan sida Google Webfonts, Khariidadaha Google, iyo bixiyeyaasha Fiidiyowga Dibadda. Maaddaama bixiyeyaashaani ay ururin karaan xog shaqsiyadeed sida cinwaankaaga IP-ga waxaan kuu oggolaaneynaa inaad halkan ku xannibto. Fadlan la soco in tani ay si weyn u yarayn karto shaqeynta iyo muuqaalka bartayada. Isbedelada ayaa dhaqan galaya marka aad dib u soo celiso bogga.
Guji si aad u awood siiso / uxirid Google Webfonts.
Guji si aad karti u siiso / uxiriso Khariidadaha Google.
Dejinta reCaptcha Google:
Dhagsii si aad awood ugu yeelato / u joojiso reCaptcha Google.
Aqbalaad dejintaQari ogeysiinta kaliya